LC Technology awade data mgbake ọrụ niile ụdị Digital Media, gụnyere ike mbanye data mgbake. Dị ka otu n'ime United States’ kasị flash ebe nchekwa data mgbake ọrụ ụlọ ọrụ, LC Technology-enye a pụrụ iche maka onye ọ bụla si novice na ọkachamara. Anyị Clearwater data mgbake ọrụ nwere ike naghachi ọ bụla na niile ụdị data. Ị mmadụ na mberede ehichapụ data files, oyiyi, videos ma ọ bụ ọdịyo faịlụ site na gị media, Ị ma ọ bụ wetara ndị media n'oge a dee usoro? Anyị data mgbake ọrụ nwere ike naghachi gị faịlụ na-esi na gị data azụ.
anyị Clearwater, Florida data mgbake ọrụ labs nọ ná nchebe gburugburu na niile ahịa data nọ onwe. Achịkwa laabu ohere pụtara naanị kwesịrị ekwesị ọkachamara aka mwute ozi. Anyị na-ahụ mgbe nile butere okûnam nkewa data maka ọchịchị, mmanye iwu ụlọ ọrụ na nzuzo na òtù. LC Technology na-agba nkịtị na-na ọkwa nke nzuzo na nchebe na nkewa ihe achọ. All natara akwụkwọ na-na-adịgide adịgide kpochapụrụ mgbe 30 ụbọchị.